बिचार Archives - Page5of5- दुनियाँको खबर
सत्तालाई भन्दा जनतालाई ध्यान देउ
on: १६ जेष्ठ २०७३, आईतवार ०४:५५
वर्षायाममा पानी परेर पहिरो तथा बाढी चल्नु अस्वाभाविक कुरा होइन । तर, अस्वभाविक वर्षा हुनु र बाढी तथा पहिरोले धनजनको क्षति हुनु स्वभाविक मान्न सकिदैन । त्यसो त प्राकृति प्रकोपलाई हामी रोक्न र...	Read more
शिक्षा मन्त्रीलाई सुत्केरी शिक्षकको प्रश्न : २२ दिनको बच्चा बोकेर विद्यालय जाऊँ ?
on: ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०७:४५
मिना पौडेल / माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, म पेशाले शिक्षक । २२ दिनकी सुत्केरी । म महिला हुँ र महिला हुनुमा मलाई गर्व छ । अझ आमा बन्दा हर्षले विभोर छु । प्रसवको पीडा आमा बनेर बच्च...	Read more
शिक्षामा किन विभेद ?
on: ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०७:३९
दीपक अनुरागी आचार्य / मानिस अन्य प्राणी भन्दा चेतनशिल प्राणी हो । धर्तिमा मानव भई जन्मिदैंमा त्यो चेतनशील प्राणी हुन्छ भन्ने चाँहि छैन । नेपालमा राजा बन्नको लागी राजा कै सन्तान हुनु पर्ने ।...	Read more
गर्ने हामी प्रधानाध्यापक र शिक्षक मात्रै हौं
on: ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०७:२९
डा. विद्यानाथ कोइराला / को हौं हामी ? प्राज्ञिक दुनियाँले उच्चतम् अङ्क खोज्छ । जीवन्त संसारले व्यावहारिक क्षमता । बजारले बिक्ने, बिकाउने तागत खोज्छ । पढ्नेले अन्तरनिहित क्षमता बाहिर्याउँन खो...	Read more